Lalàna Marijuana Florida | Fitsipika marijuana ara-pitsaboana sy lalàna
Lalàna momba ny ahi-dratsy any Florida
Mety hiova ny lalàna marijuana any Florida
Lalàna momba ny ahi-dratsy any Florida mety hanova tsy ho ela mba hamela mpandray anjara bebe kokoa amin'ny sehatry ny cannabis licence ao amin'ny Sunshine State.
Fitsarana iray dia fanamby ny tsy fitovian'ny tsy fitovian-kevitra momba ny fanitsiana ara-pitsaboana nolovan'ny olom-pirenena tamin'ny taona 2016 sy ny lalàna ara-pitsaboana momba ny marijuana izay nalain'ny mpanao lalàna Florida tamin'ny taona 2017.
Ny lalàna amin'ny ahitra any Florida dia mamela an'i Marijuana mpitsabo
Florida dia manana fandaharan'asa rongony matanjaka be, saingy ny lalàny no nanakatona ny ho mpandraharaha maro tsy hiditra amin'ny indostrian'ny cannabis.
Ny marary dia afaka mahazo ny fanafodiny, fa ny orinasa kely dia mihidy amin'ny rafitra tsena malalaka.
Ity misy lisitry ny fepetra takina ho an'ny mpitsabo rongony ara-pitsaboana any Florida:
Fomba hafa mampitebiteby toy ny kilasy, tsara fanahy, na kilasy
Marary Andoha Lava
Lasa nalemy mantsy
Fomba hafa izay miteraka adin-tsaina
Fanaintainana mafy & mitaiza
Miresaka sy manadihady ireo hevitra mety hanampy amin'ny fanovana ny lalànan'ny ahi-maintso Florida izahay raha mikasika ny lalàna momba ny mari-pana rongony ao Florida.
Florigrown - Voasedra ny lalàna Marijuana fampidirana vérgical Florida
Florigrown, orinasam-pifamoivoizana iray any Tampa, dia mitady fahazoan-dàlana amin'ny mari-pahaizana mari-pamantarana rongony mba hisoratra anarana amin'ny Toeram-pitsaboana rongony ara-pitsaboana («MMTC»).
Florigrown dia mihaika ny lalàm-panorenam-pananganana mitsangana ho an'ny lalàm-panorenana ho tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana satria misy fepetra ara-dalàna mifanohitra amin'ny fiteny tsotra momba ny fanitsiana marijuana ara-pitsaboana (ny "MMA"). Nilaza i Florigrown fa tsy nanana fahefana hamorona rafitra fahazoan-dàlana fifaninanana ny mpanao lalàna Florida, ary / na mitaky fampidirana mitsivalana ny fahazoan-dàlana rongony.
Florigrown, LLC miady amin'ny DOH - raharaha No. 2017-ca-002549
Ny fitsarana ambanivohitra dia nanohana an'i Florigrown ary nitazona ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana. Ny fanjakana dia nandany fanitsiana ny lalàmpanorenana, ny MMA, izay namoaka ny lalàna any Florida tamin'ny alàlan'ny fizarana 381.986 ao amin'ny Lalàm-panjakan'i Florida, izay mitondra ny lohateny hoe fampiasana rongony.
Ny mpanao lalàna dia nandao an'i MMA tamin'ny fangatahana fahazoan-dàlana mifaninana sy amin'ny fangatahana fampidirana maharitra mba ho lasa MMTC.
Ny Departemantan'ny Fahasalamana any Florida (ny "FDOH") dia miantso amin'ny Fitsarana Tampony ao Florida ary mangataka azy ireo hanodina ity didim-pitsarana ity hanohizana ny fepetra takiana mihombo izay mandrara ny ankamaroan'ny orinasa vaovao tsy hiditra amin'ny tsenan'ny marijuana ara-dalàna any Florida. Ny MMTC dia mandoa vola an-tapitrisany dolara matetika hanokafana, raha afaka mahazo fahazoan-dàlana ho an'ny iray ianao.
Florigrown, LLC miady amin'ny DOH - Torolàlana fohy
Inona no lazain'ny lalàna momba ny mari-pahaizana momba ny mari-pana diana any Florida momba ny fampifangaroana vovonana
Ny politikam-pitsaboana rongony sy fitsipika napetraka ao amin'ny MMA dia tanterahan'ny FDOH. Ny FDOH no mpiasam-panjakana voatondro ho fampiharana ny fizarana 381.986, Florida Statute.
Tamin'ny Jolay 2017, fizarana 381.986, Florida Statute, dia nanomboka, izay manome:
Ny ivon-toeram-pitsaboana rongony iray manana fahazoan-dàlana dia mamboly, manamboatra, mitondra, ary manala mariage ho fitsaboana. § 381.986 (8) (e) Fla.
Noho izany, ny MMTC mpanao lalàna voafaritry ny fizarana 381.986 dia mitaky fampidirana mitsivalana - saingy mila ampitahaintsika amin'ny lazain'ny MMA izay nolalovan'ny mpifidy Florida momba ny MMTC.
Ny ambaran'ny fiovan'ny rongony ara-pitsaboana any Florida momba ny fampidirana ifotony
Tamin'ny taona 2016, ny 71% tamin'ny mpifidy Florida dia nankatoavina ny MMA amin'ny lalàmpanorenana Florida izay mamela ny fampiasana ara-dalàna ny marijuana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Satria fanitsiana ny olana tokana ao amin'ny lalàmpanorenana any Florida, ny MMA dia namaritra ihany koa ny MMTC.
Ny MMA dia mamaritra ny MMTC ho "orinasa izay mahazo, mamboly, manana, manamboatra. . . mivarotra, mizara, manaratsy, or mitantana ny vokatra rongony, misy kojakoja, mifandraika amin'izany, na fitaovana fampianarana. ”
Ny MMA dia mampitaha ny lalàna momba ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana an-tsaha any Florida satria ny iray voasoratra ao amin'ny disjtig, ny MMA, ny iray kosa voasoratra ao amin'ny fifanarahana, ny lalàna momba ny mari-pana rongony any Florida.
Nilaza i Florigrown fa avelan'ny MMA fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana tafahoatra.
Ny vahoaka no nifidy ny "na" fa tsy ny "ary" izay nofehezin'ny Fitsapaham-bolan'i Florida teo ambanin'ny lalàna marijuana momba ny marijuana.
Ny fampidirana marindrano dia ahafahan'ny orinasa misimisy handray anjara amin'ny dingan'ny fambolena, famokarana ary famoahana marijuana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fampidinana ny vidin'ny fidirana amin'ny tsena marindrano sy amin'ny fanokafana ny isan'ny karazana fahazoan-dàlana azo raisina satria ny MMA dia nifanolotra.
Ny fitsarana famerenana dia nandanja ny fiteny "sy" tao amin'ny Florida Statute, ary ny teny hoe "na" amin'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana amin'ny fanapahana ny fanapahan-keviny.
Namoaka didim-pitsarana ny fitsarana voakaly fa ny lalàna ara-pitsaboana rongony 2017 dia mitaky ireo orinasa tokony “hifanaraka amin'ny famaritana voafetra kokoa izay omena ao amin'ny fanitsiana ny lalàmpanorenana,” izay niafara amin'ny lalàm-panorenana azy.
FIVAVAHANA MISY: MPANORATRA CANNABIS FLORIDA
FIVAVAHANA MISY: MARKET FlORIDA MARIJUANA
Tsy miasa amin'ny rafi-pandrefesana mitsangana i Florigrown ary milaza fa io no hevitry ny MMA.
Ny mpifidy Florida dia nankatoavin'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana miaraka amin'ny tanjona hanampiana ny "fahazoan-dàlana mivelatra amin'ny lalàm-panorenany mba hahazoana antoka ny fisian'ny fisian'ny marijuana sy ny fitsaboana azo antoka."
Nilaza i Florigrown fa ny lalàna dia manitsakitsaka ny fanitsiana ny lalàmpanorenana satria neken'ny olom-pirenena Florida ny fanitsiana miaraka amin'ny tanjona hanampiana ny fahazoan-dàlana amin'ny fizotry ny fisoratana anarana.
Ankoatr'izay, ny MMA dia namoaka karazana orinasa manokana izay mety ahazoana fahazoan-dàlana mitokana ho an'ny asa fandraharahana samihafa toa ny fambolena, ny fanodinana ary ny fizarana ny vokatra.
Ny filazalazana faharoa momba ny lalàmpanorenana an'i Florigrown manoloana ny fahazoan-dàlana mifaninana amin'ny orinasan-drongony marijuana
Ankoatr'izay, ny lalàm-panjakanana rongony Florida dia manamafy ny fizotran'ny fahazoan-dàlana mifaninana sy famerana izay mametra ny isan'ireo sampana afaka misoratra anarana ho toy ny MMTC mitambatra.
Nilaza ihany koa i Florigrown fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny hetsiky ny FDOH satria nanome tombony, tombontsoa ary tombontsoa manokana azo ampiharina amin'ny sampandraharaha sasany.
Nifidy sy nifidy fahazoan-dàlana voafetra ho an'ny MMTC i FDOH.
Navelan i FDOH ireo mpivarotra fahazoan-dàlana hivarotra ity fahazoan-dàlana tadiavina mitentina 50 tapitrisa dolara amin'ny sampandraharaha hafa.
Navelan'ny FDOH ny fivarotana fahazoan-dàlana MMTC na dia tsy niasa mihitsy aza ny fahazoan-dàlana namokatra rongony, na manompo marary iray aza.
Ny FDOH dia milaza fa mangina ny fanavaozana ny lalàm-panorenana raha toa ka mila ahitaka amin'ny zoro na hiara-miasa ny MMTC.
Nanambara izany "Tsy misy na inona na inona amin'ny fanitsiana manova ny fahefan'ny mpanao lalàna hanapa-kevitra momba ny politika mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny marijuana ara-pitsaboana any Florida."
Ny Fanjakana koa dia miady hevitra fa "ny mpanao lalàna no nanao ny fitsipi-pifehezana ara-politika izay nahaloa ny lalàm-panorenan'i Florida tamin'ny fametrahana fangatahana fahazoan-dàlana sy fandraisana anjara amin'ny tsena voalohany."
Nilaza i Florida fa ny lalàna 2017 dia “nametraka rafitra lalàm-panorenana feno sy miray hina amin'ny lisansa statistide sy ny fitsipiky ny MMTC.”
Ny lalàmpanorenana Florida no mifehy an'ity toe-javatra ity satria lalàna ambony indrindra amin'ny tany izy io.
Ny hetsika nataon'ny FDOH dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana rehefa nisafidy ny hanaraka ny lalàna Florida fa tsy amin'ny MMA.
Mampihatra amin'ny MMTC koa ve ny fanitsiana ny mari-pahaizana momba ny marijuana?
Ny MMA dia nofehezin'ireo olom-pirenena tao Florida fa tsy ny mpanao lalàna. Ny lalàna momba ny Florida dia namoaka ny lalàna.
Ny lalàm-panorenana Florida dia milaza fa ny Fitsarana tsy afaka manao lalàna tsy mifanaraka amin'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana.
Ny adihevitra momba ny politikam-bahoaka dia azo atao, fa angamba tsy maharesy lahatra ny fiampangana ara-pitsarana momba ny sy / na ny fiteny Florigrown. Tsy mahazaka ny fitsipiky ny tsena ara-drariny ny rafitra fampidirana feno.
Ny rafitra fampidirana vanim-potoana dia manakana ny mpandray anjara amin'ny tsena hafa mety tsy hifaninana amin'ny indostrian'ny cannabis. Izy ireo koa dia mamela ny mpandray anjara amin'ny tsena hifehy ny famatsiana rongony rongony raha misy mpifaninana ambany dia kely.
Satria io rafi-bola io dia manafoana ny fifaninanana, ny mpandray anjara amin'ny tsena dia afaka manome vidiny be ho an'ny rongony ara-pitsaboana manakana ny marary amin'ny fividianana rongony amin'ny vidiny mirary.
Raha ny tena izy, ireo MMTC voasoratra anarana amin'ny rafitra fampidirana mitsangana dia manana monopoly amin'ny rongony ara-pitsaboana.
Ary izay no nitranga, orinasa efatra fotsiny (Trulieve, Surterra, Curaleaf, ary Liberty Health) no mibaiko ny 81% -n'ny tsena ho an'ny voninkazo cannabis voninkazo any Florida.
Amin'ny rafitra fampidirana mitoka-monina, ny orinasa kely dia manana fahafahana hiditra sy mifaninana amin'ny indostrian'ny rongony.
Ohatra, ny orinasa iray dia mety manokana amin'ny lafiny iray amin'ny orin'asa izay mety hiteraka vidiny ambany kokoa hiditra ao amin'ny tsena, ary angamba kalitao avo kokoa noho ny haavo manokana.
Namoaka fangatahana ny Fitsarana Tampony tao Florida ho an'ny andro faharoa tsy fahita firy amin'ny firotsahana am-bava mba hanafenana manokana ny resaka momba ny lalàm-panorenana momba ny lalàm-panorenana momba ny fananganana ifotoran'i Florida ho an'ny orinasan'ny rongony tamin'ny 7 Oktobra 2020.
Ampifanaraho amin'ny vaovao momba ny legioma momba ny rongony mba haharaka ity tantara tsy tapaka momba ny lalàna Marijuana Medical Florida ity - Misoratra anarana izao